Ogaden News Agency (ONA) – Dagaal Oramada Ka Dhexqarxay oo Dhimasho iyo Dhaawac Sababay.
Dagaal Oramada Ka Dhexqarxay oo Dhimasho iyo Dhaawac Sababay.
Posted by ONA Admin	/ July 25, 2018
Wararka naga soo gaadhaya Itoobiya gaar ahaan Kililka Oramada ayaa sheegaya in dagaalo lagu hoobtay ay ka socdaan gobolka Bale. Waxaa 3-dii cishe ee u danbaysay dagaal arimo diimeed kabilowday kasocdaa magalada Goba oo ka tirsan gobolka Bale ee kilalka Oramada.
Isku dhacan oo u dhaxeeya muslimiinta iyo masiixiyiinta Oramada ah ayaa ka bilowday goob kiniisad ahaan jirtay oo qolo musliiin ah maamulka magalada Goba siiyay si ay u gadhisaan taalo lagu xasuusto nin lagu magacaabi jiray Xaaji Aadam Sado oo ahaa nin u soo dagaalamay xoraynta gobolka Oramada bulshaduna aad uqadariso.
Hadaba qolo gaalo ah oo ka cadhaysan in booska kiniisadooda taalo nin Islaam ah leeyahay laga dhiso ayaa dadkii muslimiinta ahaa weerar kusoqaaday waxaana inta lahubo dhimatay 6 ruux oo labada dhinac ah halka dad Boqol kabadana ay ku dhaawacmeen.
Dagaaalkan oo 3-dii maalmood ee udanbaysay socday ayaan ilaa hada wax xal ah laga gaadhin. Waxaana laga cabsi qabaa inuu guud ahaanba gobolka Oramada gaar ahaan gobalka Bale kufido. Qawmiyada Oramada oo islaam ubadan ayaa hadana waxaa jira dad badan oo diinta masiixiga ah haysta.
Qawmiyadaha kala duwan ee Itoobiya ku nool oo kala diin, dhaqan, luuqad, isir iyo dhul ah ayaad modaa in dhibaatooyin waawayn lakala dhex dhigayo. Waxaana maalmahan gobalada Oramada iyo Amxaarada kusoo badanaya iskudhacyada diimaha kusalaysan.